Lemongrass (စပါးလင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Lemongrass (စပါးလင်)
Lemongrass (စပါးလင်) ကဘာလဲ။
စပါးလင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
စပါးလင်ကို အစာအိမ် အောင့်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အဆစ်များ နာကျင်ခြင်း (လေးဘက်နာ)၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်းနှင့် အားအင်ကုန်ခန်းခြင်းတို့ သက်သာစေရန်အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့် သွေးတိတ်စေခြင်းတို့တွင်လည်း အသုံးပြုပါသေးတယ်။
အချို့သူတို့က ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်းတို့အတွက် စပါးလင်နှင့်စပါးလင်ဆီကို လိမ်းကြပါတယ်။
စပါးလင်ဆီကို ကြွက်သားနာကျင်ခြင်းတို့အတွက် ရှုဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အရေပြားပေါ်တွင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေပါတယ်၊ သဲဝဲ၊ ပြတ်ရှရာများ၊ အရွတ်ရောင်၊ အဆစ်လွဲ၊ အဆစ်နာခြင်း တို့ကို သက်သာစေပါတယ်။
စပါးလင်မှာ ဘက်တီးရီးယားနှင့် မှိုတို့ ပွားများခြင်းကို ဟန့်တားပေးသော၊ အနာသက်သာစေသော၊ အဖျားကျစေသော၊ သားအိမ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသော၊ ရာသီသွေးမှန်စေသော၊ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပေးသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
စပါးလင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်၊ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေခြင်း။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရှိနေစဉ် ဒါမှမဟုတ် နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးတွေကိုသာ သောက်သုံးသင့်လို့ပါ။
အခြားသော ဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေခြင်း။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် ဆေးဝါးတွေအကုန် ပါဝင်ပါတယ်။
စပါးလင် မှာပါသော ပစ္စည်းများ၊ အခြားသော ဆေးဝါးများဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိမယ်ဆိုရင် စပါးလင်ကို မည်သည့်ပုံစံနှင့်မျှ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
စပါးလင်နှင့် ဓါတ်မတည့်ဘူးဆိုရင်တော့ စပါးလင်၊ စပါးလင်အဆီနှင့် စပါးလင်ဖြင့် ထိတွေ့ထားသော မည့်သည့်ပစ္စည်းများကိုမျှ မထိကိုင်သင့်ပါ။
အစားအသောက်၊ ဆိုးဆေး၊ တာရှည်ခံဆေးနှင့် တိရိစ္ဆာန်တို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြား ဓါတ်မတည့်မှုများရှိနေခြင်း
ဆေးဖက်ဝင်အပင်၊ဖြည့်စွက်ဆေးများအတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများသည် ဓါတုဆေးဝါးများလောက် မတင်းကြပ်ပါ။ ဘေးကင်းစိတ်ချရမှုအတွက်တော့ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရပါဦးမယ်။ ယင်းဆေးကို သုံးရင် ရမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက သူ့ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုများဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
စပါးလင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
စပါးလင်ဆီကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ မျက်လုံးထဲ မဝင်ပါစေနှင့်။ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်လာမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုပုံကို ပြောင်းရင်ပြောင်း မပြောင်းရင် ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။
စပါးလင်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ သောက်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းက စိတ်မချရပါဘူး။ ယင်းက ရာသီသွေးဆင်းစေသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းနှင့် နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာ စပါးလင်သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ဘေးကင်းလားမကင်းဘူးလားဆိုတာ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မပြုလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဘေးကင်းစွာနေထိုင်ပြီး အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
စပါးလင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
စပါးလင်ကို သင့်တော်တဲ့ ပမာဏနဲ့ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ လူအများစုအတွက် ဘေးကင်းပါတယ်။ ရေတိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးကင်းမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
စပါးလင်အဆီနဲ့ ဓါတ်မတည့်သောသူတို့အတွက်ကတော့ အရေပြားယားယံခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ခြင်း၊ အဖုအပိမ့်များထွက်ခြင်းနှင့် မီးနဲ့ ထိုးသကဲ့သို့ နာကျင်ခြင်းများ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ စပါးလင်ဆီက သွေးတွင်း သကြားဓါတ် ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဆီချိုကျဆေး၊ သွေးပေါင်ကျဆေး သောက်သောသူများ့နှင့် ဆီးချိုသွေးချို၊ သွေးတွင်း သကြားဓါတ် ကျဆင်းတတ်သော သူများ အသုံးမပြုသင့်ပါ။
လူတိုင်းတော့ ယင်းဆိုးကျိုးတွေ မခံစားရနိုင်ပါဘူး။ အထက်တွင် မဖော်ပြထားသောဆိုးကျိုးများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
စပါးလင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
စပါးလင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခြားဆေးတွေ၊ဖြည့်စွက်စာတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေဟာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိသောက်သုံးနေသောဆေးဝါးတွေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့တော့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင်မှာ ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
စပါးလင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဆေးရည်အား စပါးလင်အခြောက်များကို သို့မဟုတ် အဆီကို ရေဖျော်ပေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားအဆီအမျိုးအစားများ မှလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
စပါးလင် ၂ ဂရမ် ကို ရေဆူဆူ တစ်ခွက်ဖြင့် လက်ဖက်ရည် လုပ်သောက်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးများအတွက် တစ်ရက်ကို လေးကြိမ်အထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်များသောသူတို့တွင် ပုံမှန်သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် တစ်ရက်ကို ၈၀ မီလီဂရမ် အထိ စပါးလင်အခြောက်များကို အခြားဆေးပင်များနှင့် တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုရမည့် စပါးလင် ပမာဏသည် လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူပါ။ ဆေးပမာဏသည် အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ နှင့် အခြားသော အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပါတယ်။ စပါးလင် သည် အမြဲတမ်းတော့ စိတ်မချရပါဘူး။ သင့်တော်တဲ့ ဆေးပမာဏကို သောက်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်၊ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပေးပါ။
စပါးလင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
စပါးလင်ဆေးဟာ အောက်ပါပုံစံတွေနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 8, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 18, 2019
Lemongrass. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-719-lemongrass.aspx?activeingredientid=719&activeingredientname=lemongrass. Accessed November 21, 2016
Lemongrass. http://www.home-remedies-for-you.com/herbs/lemon-grass.html. Accessed November 21, 2016
Lemongrass. http://www.herbslist.net/lemongrass.html. Accessed November 21, 2016